Kufanotaura Kuverenga | Martech Zone
Svondo, Zvita 28, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Kana ndisina chinhu chekunyora nezvangu pablog rangu, ini ndinowanzoita kubhurawuza uye ndowana mamwe mahukama anoshamisa uye ndogovana iwo panzvimbo. Kana iwe uri kutora nguva yekudzoka kune yangu saiti kana kunyorera kune yangu feed, ini ndoda kuona kuti ini handitambise nguva yako nehafu-assing blog blog.
Kunyangwe ndichiedza, zvimwe zvandatumira zvinonhuwa uye vamwe vanowana kutarisisa. Mushure mekubloga kwemakore izvozvi, zvichiri zvisingaite kwandiri kuti ndifanotaura kuverenga kwangu. Ini ndinofunga zvakada kufanana nekuzvidzivirira kumhanya kuyedza kuyedza kufanotaura mutambo unotevera. Nhabvu nhabvu dzinokunda dzinowanzo kuve nekudzikama kwakakura uye mashoma mashoma. Vanotamba zvese pasi kunge pekupedzisira pasi. Nhabvu, ivo vanoti, mutambo wema inches.
Kukunda pakubhurogira kwakafanana. Mutsara mukuru unogumbura unogona kutorerwa masaga uye kurasikirwa neyadhi, asi zvakazara, ivo vanosundira kumberi uye vanowana yekutanga pasi. Ini handigone kufanotaura kuti ndezvipi zvezvangu zvinyorwa (nhabvu = inotamba) zvinondiisa munzvimbo yekupedzisira. Ini ndinoziva kuti kusagadzikana kukuru uye zvishoma zvinokanganisa zvinondisvitsa ipapo, zvakadaro.
Nekuda kweizvozvo, ini handinetseke kuti kana kwete ichi post ndiyo ichave iyo, ini chete ndoziva kuti kana ndikaramba ndichi blog kazhinji uye ndichinyatso blog kuti ini ndicharamba ndichiwana vaverengi (nhabvu = yardage). Makwikwi akaoma, zvakadaro.
Parizvino ndiri kukwikwidzana nemunhu wese ari pazororo, emunhu wese zvakanakisa zvinyorwa zve2008 uye fungidziro dzemunhu wese dza2009. Makwikwi chaiwo aneni, zvakadaro. Makwikwi haasi kuwana nguva yekutumira. Makwikwi haasi kutsvagisa posvo zvakanaka zvakakwana kukusiya uine kernel yeruzivo yawakavinga.
Mufananidzo unoshamisa ne Brian Cassella, mutori wemifananidzo
Muna 2008, iyo blog ine chinenge chikamu chechina chemiriyoni vashanyi vane vangangoita zviuru zviviri vanyoreri (email + RSS). Ini handina kuenderera mberi nekukura pane ino blog yandaive nayo munguva yakapfuura - zvakanyanya nekuda kwemakwikwi angu. Shanduko kubasa hadzina kundibvumidza kuisa iyo nguva uye nesimba mubhurogu yandaifanira kuve nayo. Zvenguva pfupi yapfuura, ndanga ndichitendeuka iwo matanho uye ndadzoka pakukwidzirazve.
Ndiri kutarisira kuwana mashoma munzvimbo yekupedzisira muna 2009!
Tags: kushambadza kuonaclipynckwakajeka patanisenzira dzekutsvaga injini dzekutsvagaslideshare linkssolomo
Chii chinonzi Chiremera?
Zvita 28, 2008 na8:48 PM
Mablogi mazhinji ari kure-ku-cuff, tsinhiro yemunhu inotsigirwa nemaminitsi gumi pamainjini ekutsvaga. Chinoshamisa hachisi chokuti zvimwe zvakanaka uye zvimwe zvakaipa, kana kuti zvimwe zvinofarirwa uye zvimwe zvisina. Zvinonyanya kuda kuziva kuti isu tiri voraciously kudya uye kuremekedza zvemukati zvinongoomesa zvishoma pane kungotaurawo zvako.
Ini ndinofanotaura kuti kufanotaura kuverenga-pamwe nevaverengi vekuona-kuchawedzera kuoma sezvo mabhurogi ari kuramba achikura mukuzivikanwa. Kusvikira chiitiko ichi chagadzikana isu tichakwanisa kutarisira kunzwisisa maitiro ayo chaiwo.